Ahoana ny fampitomboana ny orinasantsika amin'ny rindrambaiko maimaim-poana | Avy amin'ny Linux
Ao anatin'ny tontolo izay misy fiantraikany amin'ny zavatra rehetra ataontsika ny teknolojia, zava-dehibe ny hijerentsika ny fomba ahafahantsika manararaotra azy io ho tombontsoantsika. Ny iray amin'ireo sehatra tsy maintsy hametrahantsika laharam-pahamehana ny fampiasana ny haitao dia ny orinasantsika, izay ahafahantsika mamorona fomba vaovao hampitomboana ny tombom-barotra sy hanaingoana ireo asa izay hanampy antsika hampihena ny vidiny.
Izao izany teknolojia mifototra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana izay manome antsika fahalalahana lehibe indrindra rehefa mampihatra izany amin'ny orinasantsika, na inona na inona ara-batana na an-tserasera. Izany no antony tsy maintsy hanombatombantsika ireo faritra tsirairay mandrafitra ny orinasantsika mba hahafahantsika mampiasa ireo fitaovana maimaimpoana mety amin'izany.
1 Tombony amin'ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasa
2 Dingana tokony horaisina alohan'ny hampidirana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasa
2.1 Fakafakao ny maodelim-barotra ankehitriny.
2.2 Ataovy amin'ny laharam-pahamehana ny orinasa
2.3 Azavao ny fahaizantsika
3 Mampitombo ny orinasantsika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana
3.1 Mamorona marika
3.2 Manangana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa
3.3 Ampitomboy ny tombom-barotra
3.4 Ahenao ny fandaniana sy ny fatiantoka
Tombony amin'ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasa
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasa, fa afaka manasongadina telo isika:
Ny sandan'ny vidin'ny fampiharana rindrambaiko maimaim-poana sy ny fitaovana open source dia ambany.
Rindrambaiko loharano malalaka sy malalaka dia havaozina sy azo antoka tsy tapaka.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko loharano malalaka sy misokatra amin'ny orinasantsika dia manafaka ny tenantsika amin'ireo gadra mpivarotra isika.
Dingana tokony horaisina alohan'ny hampidirana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasa
Ny fizotry ny fanombanana dia mitondra antsika amin'ny lalana samihafa ary manery antsika hanao laharam-pahamehana na hanaraka drafitra ankapobeny, hoy ny zavatra niainako tamiko: «fa tsy maintsy manombatombana ny dingana tsirairay ataontsika isika rehefa mampiditra ny haitao amin'ny orinasantsika«. Izany no antony, ho toy ny referansa, hizara aminareo dingana vitsivitsy izay matetika ataoko aho rehefa mampiditra rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasa an-tserasera na ara-batana.
Fakafakao ny maodelim-barotra ankehitriny.
Na manana orinasa ara-batana na an-tserasera mihazakazaka isika, na te hanangana orinasa vaovao, dia zava-dehibe indrindra izany andao hofakafakaina tsara ny maodelim-pandraharahana, manombana amin'ny zavatra maro:
Ny fomba fanatanterahana ny fomba fiasa.
Ny tombony sy fatiantoka ny maodelim-pandraharahana.
Ireo fizotra izay mila fanatsarana.
Fanombanana sy fanazavana ny momba ny mpifaninana aminay.
Fanombanana sy laharam-pahamehana ireo mpanjifantsika mety sy ankehitriny.
Fanoratana sy fanasokajiana ireo fitaovana teknolojia ampiasainay.
Amin'ity fizotry ny fandalinana ity dia miankina amiko fitaovana canvas open source (Ohatra, izy Modely vita amin'ny lamba canvas modely), izay mamela ahy handrafitra tsara ny maodelin'ny orinasako.
Ataovy amin'ny laharam-pahamehana ny orinasa
Ny fanombanana ny maodelim-pandraharahana ataontsika dia hamorona rafitra somary malalaka ho antsika, noho izany dia tsy maintsy ataontsika arakaraka ny laharam-pahamehantsika izany. raha tiantsika hitombo ny orinasantsika Tokony horesahintsika aloha ireo faritra izay mitondra ny risika faran'izay kely indrindra amin'ny fatiantoka, arahin'ireo faritra manana tanjona hampiakarana fidiram-bola.
Mety hafangaro izany, saingy indrindra raha te hampiditra ny haitao isika, ohatra, amin'ny trano fisakafoanana, ny tena zava-dehibe dia ny manomboka amin'ny marketing, manohy ny sehatry ny kaonty fitantanan-draharaham-panjakana ary mifarana amin'ny alàlan'ny automatisation ny varotra sy ny fizotran'ny lakozia.
Azavao ny fahaizantsika
Fahadisoana mahazatra izaitsizy tokoa ankehitriny mino izahay fa afaka manolo zavatra rehetra amin'ny haitao haingana sy tsy misy fahalalanaNa dia sarotra aza ny mamantatra azy dia zava-dehibe ny fampiharana tsirairay, ny automaton na ny fitaovana ampiasaintsika, dia manana tombana faran'izay kely indrindra ary koa ilay rindranasa dia hanana lalam-pianarana tokony hodinihintsika.
Amin'ny tranga maro "hafa kokoa«, Noho izany dia tsara ny hampiasa ireo fitaovana izay hanome valiny mahafa-po antsika fotsiny fa tsy ho entin'ny euphoria amin'ny fampiasana fitaovana marobe hitantsika amin'ny tanjona manokana.
Mampitombo ny orinasantsika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana
Efa fantatsika fa hampiditra rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasan-tsika isika, hanampiana azy hitombo na, raha tsy izany, hisorohana ny fatiantoka. Amin'ity fotoana ity dia te hanome anao toro-hevitra vitsivitsy aho hahatratrarana ireo tanjona ireo.
Tokony hotadidinao fa ny tanjontsika voalohany dia ny: "Ampitomboy ny tombom-barotra ary mampihena ny fandaniana na fatiantoka" fa toy izany koa no tsy maintsy ampiantsika an'ity "Mamorona marika ary tazomy ny mpanjifa." Manomboka amin'ireo toerana roa ireo dia andao hizara ny hetsika ataontsika amin'ny faritra maro.
Ny tena tanjon'ny orinasantsika dia ny mamorona a marika sy famantarana orinasaTsy maninona ny halehiben'ny asa ataontsika, mila mora ny mamantatra azy ary maharitra rehefa mandeha ny fotoana. Toy izany koa isika omnichannel ary manana ny maha izy azy na amin'ny toe-javatra inona na manao ahoana.
Ny marika sy ny mombamomba ny orinasa, tsy tokony ho solon'ny maso fotsiny, ary koa amin'ny asa ataontsika amin'ny maha orinasa antsika, amin'ny tanjontsika ary amin'ny fomba fanatanterahantsika ny fizotrantsika. Ity fizotry ny maha-izy azy ity koa dia tsy maintsy ampifandraisina hadihadio ny teny lakilen'ny orinasantsika, ankoatry ny fisolo tena ny iraka, ny vina ary ny sakany.
Misy maromaro fitaovana maimaimpoana fa amin'izao fotoana izao dia afaka manampy antsika izy ireo toy ny: GIMP, Scribus, Inkscape, blender, tetikasa pensilihazo, Dia Diagram Editor miaraka amin'ny hafa.
Ny fizotry ny tsy fivadihan'ny mpanjifa dia lava be, manaraka làlana mandeha: manomboka amin'ny fananana mari-pamantarana orinasa tena tsara, amin'ny alàlan'ny fitaovam-barotra sy fanaraha-maso, hatramin'ny fananana fampiasa hitantanana ireo tetikasan'ny orinasantsika.
Ny automatisation amin'ny varotra, fanaraha-maso, marketing ary fizotran'ny sanda fanampiny amin'ny vokatra dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo ny fomba marina indrindra hitazonana ny mpanjifanay.
Ho an'ity asa lehibe nefa sarotra ity dia azontsika atao ny mampiasa fitaovana maimaim-poana isan-karazany toy ny CRM, mpandrafitra tetik'asa, sehatra ecommerce ary vahaolana, bilaogy, ankoatry ny hafa. Raha tsy maintsy milaza ny sasany isika dia afaka miteny hoe: Magento, SugarCRM, Idempiere, Taiga, Prestashop, WordPress ary maro hafa.
Ampitomboy ny tombom-barotra
Raha manana ny maha izy azy orinasa lehibe izahay, miaraka amina fizotrany sy fomba fanao tsara mifantoka amin'ny tsy fivadihan'ny mpanjifanay, ankoatr'izay dia mampiditra fitaovana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasanay izahay, angamba kendrena hampitombo ny tombom-bolanay.
Ampitomboy ny tombom-barotra azonay, tsy isalasalana fa tanjon'ny rehetra, ny fahazoana vokatra tsara dia matetika vokatry ny fihetsika teo aloha. Ny fampitomboana ny tombom-barotra dia mifandray akaiky amin'ny fampitomboana ny varotra na ny fiovam-po, na dia tsy izany foana no izy.
Ny rindrambaiko maimaimpoana dia manana fitaovana tsy manam-paharoa ho an'ity dingana lehibe ity, ny zavatra mora indrindra dia ny fampidirana fitaovana toy ny CMS, ERP, statistika, rindrambaiko faktiora, CRM, vondrom-piarahamonina, teboka amidy, Blogging, SEO, Optimization amin'ny Internet, Media sosialy, endrika, Pejy fitobiana, mailaka, ivon-telefaona hafa.
Anisan'ireo lisitry ny fitaovana afaka manampy antsika amin'ity asa ananantsika ity: WordPress, matoatoa, mephisto, seo tontonana, socioboard, piwik, mautic, lahateny, faktiora faktiora ankoatry ny hafa.
Ahenao ny fandaniana sy ny fatiantoka
Angamba ny lakilen'ny orinasa mahomby dia ny fampihenana ny fandaniana sy ny fatiantoka, misy orinasa ara-batana sy an-tserasera maro, izay misy varotra sy fidiram-bola marobe, fa ny tombony azony dia voakasiky ny fandaniam-bola be loatra amin'ny famokarana na fatiantoka tsy tambo isaina mifototra amin'ny toetra ratsy ny vokatra na ny tohana avoakany.
Mba hisorohana ireo olana ireo dia afaka mampiasa fitaovana fitantanana mpanjifa sy mpamatsy izahay, ary koa ERP ahafahantsika mifehy ny fizotranay, ny kaonty ary ny fizotran'ny fitantananay. Toy izany koa ny fomba lehibe hanalefahana ny fatiantoka sy ny fandaniana dia amin'ny famakafakana ny angon-drakitra misy anay.
Fitaovana fandalinana angona, angona momba ny milina, maodely mialoha, ankoatry ny hafa, nanjary nilaina tsikelikely tamin'ny asa aman-draharaha. Ny fandinihana marina ny valin'ireo fitaovana ireo Mety hanan-danja tokoa izy ireo rehefa mandray fanapahan-kevitra mamela antsika hampihena ny fandaniana sy ny fatiantoka.
Misy fitaovana maimaimpoana maromaro miandraikitra ny fanampiana antsika mampihena ny fandaniana sy ny fatiantoka, Anisan'izany azontsika lazaina: Odoo, Idempiere, Zurmo, vtiger, ERPNext, mianatra, r, ankoatry ny hafa. Fa tsara ihany koa ny manamarika fa ny fampiasana rindrambaiko maimaim-poana amin'ny fotoana maro dia manampy antsika koa hampihena ny fandaniana hatramin'ny 80% mifandraika amin'ny fahazoan-dàlana, fanampiana ary fotodrafitrasa.
Famaranana, Azoko lazaina fa fitaovam-piadiana iray hafa ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny orinasanay, mba hisongadinana eo amin'ireo mpifaninana amintsika, tsy tokony hatahotra isika, fanapahan-kevitra izay mazava ho azy fa hitondra ezaka lehibe amin'ny tranga sasany, saingy izany dia avelao izahay hitombo amin'ny farany haingana sy soa aman-tsara.
Ity angamba no fampidirana lahatsoratra iray, izay ahitantsika fitaovana sy teknika amin'ny antsipiriany bebe kokoa hahafahantsika mampihatra ireo toerana efatra nianarantsika androany.
Manantena aho fa tianao izany ary aza adino ny mamela ny hevitrao sy ny hevitrao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fampitomboana ny orinasantsika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana
Tena tsara, miandry ny lahatsoratra faharoa amin'ny antsipiriany ary raha mila manitatra amin'ny fahatelo na fahefatra ianao hamela anay hevitra fampiharana tsara mifototra amin'ny zavatra niainanao, dia mety izany.
Heveriko fa tsy ampiasaina hialana voly ny rindrambaiko manana. Fa satria tsy misy hafa. Ohatra Photoshop. Araka izay voalaza, dia manome fihodinana arivo mahery Mazava fa ny isan'ny mpamorona ao ambadik'izany dia hafa tanteraka. Fa amin'ny farany dia misy mpamorona mankany amin'ny fonosana adobe. Ary bebe kokoa mitovy amin'ny blender.
Julio Martus dia hoy izy:
Mahaliana ny fanandraman'ny marika orinasa hampifangaro filozofia roa sy ny filozofia amin'ny fitaovana ampiasainy, fa raha ny marina dia heveriko fa manandrana mampifandray zavatra roa tsy misy ifandraisany amin'izany ianao ...
Ny Famoronana sary, marika na fanekena ny tsy fivadihan'ny mpanjifanao dia misy ifandraisany amin'ny fihetsikao tahaka ny vokatrao, ny fahitana azy mora foana, ary ny tombony azony ho an'ny mpanjifanao, ary inona ny manavaka anao amin'ny fifaninanana ataonao …
Etsy ankilany, inona ny fitaovana ampiasainao hanaovana izany… tsy misy ifandraisany amin'izany tanjona izany. Ao amin'ilay lahatsoratra dia notanisainy aho ary notononiko "fa ny tombom-bolanao dia misy akony lehibe amin'ny fandaniam-bola be loatra amin'ny famokarana na fatiantoka tsy tambo isaina mifototra amin'ny kalitaon'ny vokatra na ny fanohanana avo lenta" raha ratsy ny vokatra dia ampiasao izay ampiasainao dia rindrambaiko maimaimpoana. , ho ratsy hatrany ny fananana.
Manaiky aho fa raha te hampiasa ireo fitaovana rehetra ireo ianao ary tsy afaka mandoa vola amin'ny vahaolana arahin'antoka, dia manana vahaolana atolotry ny rindrambaiko maimaimpoana izay afaka manampy anao amin'ny lahasa ity.
Misy ny rindranasa izay tena sarotra soloina vahaolana rindrambaiko maimaimpoana, misy olona nanonona ny Photoshop. Gimp tena tsy ampy betsaka, Autocad, na eo aza ny vahaolana DWG misokatra Autocad 2d sy 3d dia ambony.
Ary farany, ohatrinona amin'ny volavolam-bidinao no lany amin'ny teknolojia ...
Valiny tamin'i Julio Martus
Jaime Prado dia hoy izy:
Ary saika manaiky tanteraka aho!
Raha marina fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia manokatra fomba iray hanombohantsika na hanitarana ny orinasa, na izany aza, misy faritra izay nahatratra ambaratonga iray, mitaky rindrambaiko matanjaka kokoa sy / na miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika manam-pahaizana manokana, satria tonga any amin'ny toerana izay olana bebe kokoa noho ny mpiasa! Ohatra iray amin'ny tranga ERP, rehefa teraka ny orinasako, 2 taona lasa izay, nanomboka tamin'ny rindrambaiko maimaimpoana iray izahay ary ny marina dia niasa tamin'ny fomba tsara, nanana mpahay siansa momba ny solosaina izahay ary maro hafa na Kely ny fahaizany mitondra fikolokoloana.
Rehefa nahavita nitombo kely toy ny orinasa izahay dia nanjary sarotra kokoa taminay izany, ka nanapa-kevitra izahay hangataka ny fampiharana ERP matanjaka kokoa, ary afaka mitondra olana momba ny fikojakojana any amin'ny orinasa ivelany.
Avelako eto ny fampitahana ny erp! http://www.ekamat.es/navision/comparativa-erp.php
Saingy manizingizina aho fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia mamorona fari-javatra isan-karazany ary raha tsy misy izany dia tsy ho hitanay ny mahasoa azy!
Valiny tamin'i Jaime Prado
Quodlibet: mpilalao mozika tsara sy milamina